I-Lana-Sea Beach! I-villa enhle yokunethezeka yasolwandle eqashisayo imizuzwana engu-3 ukuya ebhishi - I-Airbnb
I-Lana-Sea Beach! I-villa enhle yokunethezeka yasolwandle eqashisayo imizuzwana engu-3 ukuya ebhishi
Itoshima-shi, Fukuoka-ken, i-Japan
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Tomoko
U-Tomoko Ungumbungazi ovelele
I-villa enhle yolwandle ebheke ulwandle oluhle e-Itoshima, eseduze neFukuoka. Sicela uyisebenzise nabangani bakho nomndeni wakho. Ungaphinda ube ne-BBQ! Sicela usithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Esinye isivakashi sethu sathi: “Indawo enhle angikaze ngiyivakashele ngaphambili ekuphileni kwami!” Kufana neholidi laseNingizimu Yurophu. Yindawo ehamba phambili njengendawo yokudlela esemfashinini e-Itoshima, imvelo eningi, kanye nesizinda sekamu lokuqeqesha. Ukukhipha amagciwane ngotshwala.
Ngaphansi kokuqondisa kwesiteshi samaphoyisa, lesi sikhungo sinqatshelwe ngokuphelele ukuthi sisetshenziswe abantu abanama-tattoos noma abanamandla aphikisana nomphakathi.
Imizuzu engama-45 ukusuka esikhumulweni sezindiza iFukuoka, kunevillage phambi kolwandle. "Angicabangi ukuthi iJapan."
"Ayikho enye indawo engiyaziyo efana nalena." "Ngiyabonga ngokucabanga nomndeni wami." "Ingihlabe umxhwele le ndawo." Futhi kuyindawo enhle yamasemina nokuqeqeshwa kwezinkampani.
Imizuzu engu-45 ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Fukuoka, isikhathi esihle esikulindile.Ungajabulela nomndeni wakho, osebenza nabo kanye nothandekayo. Isivakashi esivela eYurophu sithe "Indawo enhle ngempela engakaze uyivakashe ngaphambili empilweni yami."
2 osofa, omatilasi abangu- 4
4.92 · 285 okushiwo abanye
I-Itoshima iyindawo enhle ebukekayo yolwandle nezintaba engafinyelelwa ngemizuzu engama-45 nje ukusuka esikhumulweni sezindiza saseFukuoka.
Muva nje, ibilokhu iheha ukunakwa njengendawo yemfashini, futhi kunezindawo zokudlela eziningi nezindawo zokudlela ezisemfashinini. Imifino emisha yemvelo, inhlanzi kanye nezimbaza ezivela oLwandle iGenkai, ingulube ye-Itoshima. Iqhugwane i-oyster lidumile ebusika. Ungaqhamuka esikhumulweni sezindiza saseFukuoka ngamamunuthi angama-45 kuphela.
I-Itoshima isiphenduke indawo edumile yezingcweti, ukudla okuhlukile, kanye nemibono ehlukahlukene yemvelo. Idume ngezinhlanzi ezintsha, imifino kanye nezithelo ezimnandi. Futhi, ukukhethwa okukhulu kwezindlu ze-oyster kunikeza umoya oyingqayizivele wokujabulela i-shellfish kusukela maphakathi kuya maphakathi kuya phezulu. ngasekupheleni kuka-Okthoba kuze kube uMashi.
Ngemva kokufika kuqala, sizokwazisa mayelana nokusetshenziswa.
Sicela usazise isikhathi sakho sokungena kusenesikhathi.
Okokuqala, sizokwazisa mayelana nokusetshenziswa.
Sicela usazise ngesikhathi sakho sokungena kusenesikhathi.
Zizwe ukhululekile ukungibuza noma yini.
Ngicela ungibuze noma yini.
Okokuqala, sizokwazisa mayelana nokusetshenziswa…
UTomoko Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: M400003383
Hlola ezinye izinketho ezise- Itoshima-shi namaphethelo